मृतक महिलाका श्रीमान् भन्छन् : टिचिङमै रहँदा उनलाई भाइरस सरेको हुनुपर्छ - बडिमालिका खबर
काठमाडौँ — कोरोनाका कारण मुलुकमा पहिलोपटक एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे–९ की २९ वर्षीया महिलाको बिहीबार धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
मृतक महिलाका श्रीमानले भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै पत्नीलाई संक्रमण भएको हुन सक्‍ने बताए । उनले भने, ‘लकडाउनका बेला हामी घरमै बसेका थियौं । उनलाई कसरी कोरोना लाग्यो ? सोचिराछु । हामीले बाहिरबाट आएकालाई पनि भेटेका थिएनौं । टिचिङमै रहँदा उनलाई भाइरस सरेको हुनुपर्छ ।’
शनिबार बिहान फेरि शव दिन अनुरोध गर्दा डाक्टरले हामीलाई थप सतर्क भएर, कसैलाई नछोई, छुट्टै बस्न आग्रह गरे । अस्पतालले नभने पनि श्रीमतीको मृत्यु कोरोनाले भएको हो कि भन्ने शंका लाग्यो । केही बेरपछि इमर्जेन्सी वरिपरि कसैलाई आउन दिएनन् । त्यसपछि उनको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको रहेछ भन्ने लाग्यो । अस्पतालमा केही कर्मचारीले मृत्युको कारण कोरोना भएको पनि सुनाए । त्यसपछि थप सतर्क भयौं । १० दिनको बच्चा स्वस्थ छ । उसलाई ल्याक्टोजिन खान दिइरहेका छौं । ठूलो छोरा गाउँमै छ । उनीसँगको सम्बन्ध सम्झिरहेको छु । रुन्छु । मैले चिन्ता लिँदा आमा र बहिनीले पनि चिन्ता लिने भएकाले मन दह्रो बनाएर बसेको छु । अस्पतालले शनिबार दिउँसो १० दिनको छोरा र हाम्रो पनि स्वाब परीक्षणका लागि लगेको छ । रिपोर्ट के आउने हो ?
लकडाउनका बेला हामी घरमै बसेका थियौं । उनलाई कसरी कोरोना लाग्यो ? सोचिराछु । हामीले बाहिरबाट आएकालाई पनि भेटेका थिएनौं । टिचिङमै रहँदा उनलाई भाइरस सरेको हुनुपर्छ । याे समाचार कान्तीपुर दैनिकबाट शाभार गरिएकाे हाे ।
सेनाका एक उच्च अधिकारीमा पनि कोरोना संक्रमण
भारतबाट लुकीछिपी भित्रन थालेपछि सीमामा म्यादी प्रहरी खटाइने